You are here: Home Literature [Burmese] Literature [BURMESE] သို့ငငျ သို့ဆငျ့ - ဆနျးထှနျး(မနျးတက်ကသိုလျ)
... ရ၀မ်သွေးချင်းများ - M.မျိုးနောင် နမ်တီးဆန်မြစ်ဝှမ်း ရ၀မ်တို့ဌာနေ - ယုဝတီဂျင်းဖောမယ် ကချင်ပြည်နယ် ရ၀မ်စီရင်ထုံး - ဦးအောင်သန်းထွန်း စွဲလန်းနှစ်သက် တောင်ပေါ်လဖက် - ကချင်မြေ-သန်းဆောင် ကချင်အမျိုးသားတို့၏ပဋိညာဉ်စာချုပ် ...
2. မွောကျပိုငျးက ​လျောဝျေါမြား - ဗနျးမျောကြျောဝငျး
... ရ၀မ်သွေးချင်းများ - M.မျိုးနောင် နမ်တီးဆန်မြစ်ဝှမ်း ရ၀မ်တို့ဌာနေ - ယုဝတီဂျင်းဖောမယ် ကချင်ပြည်နယ် ရ၀မ်စီရင်ထုံး - ဦးအောင်သန်းထွန်း စွဲလန်းနှစ်သက် တောင်ပေါ်လဖက် - ကချင်မြေ-သန်းဆောင် The Kachin Tribes ...
3. ကခငျြအမြိုးသားတို့၏ ပဋိညာဉျစာခြုပျ - ကခငျြမွသေနျးဆောငျ
4. ကခငျြပွညျနယျ ရဝမျစီရငျထုံး - ဦးအောငျသနျးထှနျး
... မြောက်ဖျားပိုင်းစွန်းမှ ရ၀မ်သွေးချင်းများ - M.မျိုးနောင် နမ်တီးဆန်မြစ်ဝှမ်း ရ၀မ်တို့ဌာနေ - ယုဝတီဂျင်းဖောမယ် ...
5. အမပေ့နျးမြား လနျးစခေငျြသညျ - ယုဝတီဂငျြးဖောမယျ
... စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်သက် (ခ) ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်၏ စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
6. ရှမျးစာပသေမိုငျးနှငျ့နနျခြိုရှမျးမြားအကွောငျး - ယုဝတီဂငျြးဖောမယျ
... ဖွဈပါသညျ။ Download Related Articles ရှမ်းအမျိုးသမီး စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်သက် (ခ) ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်၏ စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
7. သိင်္ဂီရွှေစင်ချောင်း - ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်
eBook file size: 3.43 MB ebook pages: 48 Publication: ၁၉၆၁-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ-မေလ၊ အတွဲ(၉)၊ အမှတ်(၆ နှင့် ၇)တို့တွင် နှစ်လ အခန်းဆက်ရှည်အဖြစ် ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ယုဝတီဂျင်းဖောမယ် ကလောင်အမည်ခံ ရှမ်းအမျိုးသမီးစာရေးဆရာမကြီး ...
8. နမ်တီးဆန်မြစ်ဝှမ်း ရ၀မ်တို့ဌာနေ - ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်
eBook file size: 1.94 MB ebook pages: 15 Publication: ၁၉၆၀-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် သွေးသောက်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး။ download -Related Articles- ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
9. ပင်လုံစိတ်ဓာတ် - ယုဝတီဂျင်းဖောမယ်